Hongkong neShanghai Hotels vanozivisa zvabuda muna 2013
Location: musha » Kutumira » Newsletter » Hongkong neShanghai Hotels vanozivisa zvabuda muna 2013
Iyo Hongkong neShanghai Hotels, Limited nhasi yakazivisa purofiti inowanikwa kune vanogovana 2013 yeHK $1,712 miriyoni, zvichienzaniswa neHK $1,555 miriyoni muna 2012.
The Hongkong neShanghai Hotels, Limited nhasi yazivisa purofiti inowanikwa kune vane mashareholders muna 2013 yeHK$1,712 miriyoni, zvichienzaniswa neHK$1,555 miriyoni muna 2012. Pundutso yepasi pasi inokonzerwa nevaridzi vemasheya yakawedzera ne16% kusvika HK$511 miriyoni.
Mihoro pachikamu chimwe nechimwe muna 2013 yaive HK$1.14 zvichienzaniswa neHK$1.04 muna 2012. Bhodhi rakakurudzira chikamu chekupedzisira chegumi nembiri HK masendi pashereti kuvaridzi. Zvichisanganiswa neiyo 12 interim dividend, izvi zvinomiririra chikamu chakakwana chegumi nematanhatu HK cents per share for 2013, kuwedzera kwe16% kupfuura gore rapfuura.
Clement KM Kwok, Managing Director uye Chief Executive Officer weHongkong neShanghai Hotels, Limited (HSH) vakataura nezvechiziviso:
“2013 raive gore rakabatikana uye rine mubairo kuboka redu. Ndiri kufara kuzivisa mamwe madhiri matsva anonakidza, mapurojekiti ekugadzirisa akabudirira uye mhedzisiro yemari inogutsa. Takapemberera zviitiko zvakakosha mugore rapfuura: 85th Anniversary yeThe Peninsula Hong Kong; 25th Anivesari yePeninsula New York; 15th Anniversary yePeninsula Bangkok, uye 125th Anniversary yeThe Peak Tram.
“Peninsula Paris, hotera yeBoka yekutanga muEurope, inotarisirwa kuvhurwa muna 2014. Takawana kufarira kwe50% munzvimbo yekutengeserana iripo iri pa1-5 Grosvenor Place, Belgravia, London, nemari ingangoita HK$1,564 miriyoni (GBP132.5). .XNUMX mamiriyoni). Pamwe chete nemumwe wedu, Grosvenor, tichatsvaga mvumo yekuronga kuti tivandudze zvakare muhotera yeThe Peninsula London uye nzvimbo dzekugara. Takaitawo chibvumirano nemumwe wedu mukuru weYoma Strategic Holdings Limited chekudzosera chivakwa chenhaka chinova chaimbova muzinda weMyanmar Railway Company muYangon, Myanmar, kuti chivandudzwe sePeninsula Yangon,” vakadaro VaKwok.
"Kutorwa kwedu kwaJune 2013 kwenzvimbo yekutengeserana pa21 avenue Kleber, Paris kweinenge HK $566 miriyoni (EUR56 miriyoni) kuchaunza kukosha kwenguva refu kuKambani, nekuda kwenzvimbo yayo iri padyo nePeninsula Paris," akadaro Mr Kwok. "Nezvirongwa zvitsva izvi, ndine chivimbo chekuti kukura kwekambani yedu kuri munzira chaiyo."
Mr Kwok vakaenderera mberi vachiti: “Mugore rino rine mhirizhonga, kunaka kwepamusoro kwezvivakwa zvedu nemhando zvakaramba zvakatsiga. Tichisanganiswa nematanho ekudzora mutengo weboka, sarudzo yekudyara mari, manejimendi ane hunyanzvi uye kutonga kwakasimba kwekambani, Kambani yedu yakashuma kuwedzera kwemari munenge mabhizinesi ese ari muBoka zvichienzaniswa ne2012.
"Muna 2013, mari yedu yekugovera mahotera yakawedzera neHK $ 159 mamiriyoni, kukura kwe4% pamusoro pe2012. Peninsula Hong Kong yakadzokera kuhuwandu hwakazara muna May uye isu tinotarisira kuona humwe huwandu hwekukura muna 2014 negore rakazara rekushanda. Chikamu chedu chezvivakwa zvekutengesa chinoenderera mberi nekupa mupiro wakatsiga kune mihoro yedu muna 2013 nemidziyo yedu yakakosha, The Repulse Bay Complex, kuwana mibairo inogutsa ne 4% kukura kwemari kunyangwe musika wakadzikira wezvivakwa uye kusagadzikana kukuru kwehupfumi. Chikamu chedu cheMakirabhu neMasevhisi chakaramba chichienderana muna 2013, nekuwedzera kweHK$98 miriyoni (18%) mumari yese muna 2012."
HSH yakatanga chiono chitsva cheumbozha hwakasimba hweboka muna 2013, Sustainable Luxury Vision 2020. Mr Kwok vakatsanangura kuti: “Vision 2020 inoisa kusimba pamwoyo webhizinesi remhando yedu uye mhando yedu. Kuunza paumbozha uye kusimba hakusi pasina zvinonetsa, asi isu tinoona mukana chaiwo wekuita izvi nenzira inozadzisa nhaka yedu yemhando, kufunga uye kutarisisa kune zvakadzama. "
HSH ndeimwe yemakambani ekutanga-akanyorwa pasi rose kuburitsa chirevo chayo zvinoenderana neiyo itsva G4 Sustainability Reporting Guidelines yeGlobal Reporting Initiative (“GRI”) uye kupihwa mvumo neGRI mucheki yeMateriality Matters. GRI inzira inozivikanwa pasi rose yekusimudzira kushuma.
"Simba reBoka redu rinoramba richibva mukuzvipira kwedu kune remangwana renguva refu. Izvi zvinopa chiono uye chishuvo chekudyara mumidziyo yekugadzira kwavo kukosha kwenguva refu uye simba rinoramba riripo rekufamba nemunguva pfupi-pfupi muhupfumi pasina kukanganisa kunaka kwezvigadzirwa nemasevhisi edu. Mumamiriro ezvinhu ehupfumi asina kusimba ayo atinogara tichisangana nawo mumamiriro ezvinhu anhasi, kuzvipira uku kwatigonesa kuita sarudzo dzekudyara nekushandisa mari netarisiro yenguva refu uye kuchengetedza kunaka kwesevhisi yedu uye kuenderera kwevanhu vedu. Ndichifunga izvi, ndinoramba ndiine tariro yekuti tiri kuenderera mberi nekuronga nzira iyo inosimudzira kunaka uye kukosha kwemidziyo yedu uye kuunza kudzoka kwenguva refu kune vanogovanisa vedu, "akadaro Mr Kwok.
Tichitarisa ku2014, VaKwok vakati: "Kwegore ra2014, tiri kuona maitiro akanaka mumisika yedu inokosha, kunyanya kuHong Kong uko zvinhu zvedu zvinokosha zvePeninsula Hong Kong, The Repulse Bay Complex uye The Peak Tower zviripo. 2014 ichaona gore rekutanga rakazara remupiro wemupiro kubva kuPeninsula Hong Kong hotera yakagadziridzwa zvizere uye eRicou inoshandirwa dzimba paThe Repulse Bay Complex. Kumwe kunhu, manzwiro ekufamba uye kushandisa mari zvinoramba zvichiratidza kuvandudzwa neakanyanya kunaka macro maitiro. Nezvemari, takagadzirirwa zvakanaka remangwana renguva refu tichitsigirwa nepepa rakasimba rinosanganisira midziyo yakakosha yemhando yepamusoro uye yakaderera yegiya. "
“Kambani yedu inotsigirwa nenhaka yakasimba iyo inounza hunhu hwakasiyana uye kuzivikanwa kuKambani yedu nemhando dzedu, zvigadzirwa nemasevhisi. Zvisinei, haisi nhoroondo yedu yemakore 148 chete inotibatsira; takazvipira kuvandudza nekuvandudza zvigadzirwa nemasevhisi edu kugadzira ndangariro dzakakosha uye zviitiko zvevaenzi vedu, "akadaro Mr Kwok.
Caribbean Tourism Organisation inoburitsa chirevo kuUK Air Passenger Duty
Madutu makuru acharova Florida Spring Breakers
Heathrow kupedzisa kumeso kwemask mandate munaKurume 16
Rubatsiro Runodiwa! New Chaos kuMunich neFrankfurt...
Musika weSports Medicine wakaiswa kuratidza kukura kwakasimba ...
770 kutora-kusimuka uye kumhara kwakadzimwa kuFrankfurt ...
Nguva Itsva Kwete Yevashanyi Chete: Hapasisina COVID...
Ndege itsva yeCaribbean Arajet inoraira 20 737 MAX ndege
Unogona here kufungidzira kuti ndeipi UK Hotel yakanyanya kunaka?
Zvitsuwa zveTurks neCaicos Ona Kuwedzera Kukuru kweVashanyi ...